IINDLELA EZI-8 EZILUNGILEYO ZOKULANDELA EMVA KOMSITHO WENETHIWEKHI - UMSEBENZI WEENGCEBISO NGAMAKHONDO
Iindlela ezi-8 eziLungileyo zokuLandela emva koMsitho weNethiwekhi
Umsebenzi Weengcebiso Ngamakhondo
Xa ekugqibeleni ukhaba umva ukonwabela ixesha lokuphumla emva kwaloo msitho womnatha uxakekileyo, usenokungacingi ukuba unezinto ezininzi onokubonisa zona. Le ndawo inkulu yamakhadi eshishini ngokuqinisekileyo ikhangeleka inomtsalane, kodwa ungayiguqula njani ibe yinto enenzuzo?
Ndiyakuvuyela! Usenokungakuqondi oko, kodwa ufikelele nje encotsheni yokuqala yamatye enkqubo yothungelwano. Ngoku kuqhubeka kwinqanaba lesibini-ukuvuna umvuzo. Sebenzisa ezi ngcebiso zisibhozo ukulandela ukuhambisa kwakho ngovuyo kunye nokujika uthungelwano kukhokelele kwishishini, kwaye i-ROI yohambo lwakho iya kuqala ukwenzeka ngokukhawuleza.Intengiso
1. Qhagamshela kwi-LinkedIn
Thumela bonke abafowunelwa bakho kumsitho isimemo sokuqhagamshela kwi-LinkedIn. Veza umnqweno wakho wokubazisa kwabanye abaqeqeshi kwinethiwekhi yakho. Ngubani owaziyo? Banokubonelela ukuba benze okufanayo nakuwe, bakuncede wandise ukufikelela kwakho kunye nefuthe kulo lonke ishishini.
2. Thumela isiQinisekiso esiBalulekileyo
Enye indlela ebalaseleyo yokulandela umntu onxibelelana naye kukuthumela umxholo obalulekileyo. Babuze ukuba bangathanda ukubhalisela uhlaziyo lwe-imeyile yenkampani yakho ukuze ufunde okungakumbi malunga neemveliso zakho kunye / okanye neenkonzo. Ukuba inkampani yakho ibhale nje iphepha elimhlophe eliqaqambileyo, dubula umnxibelelwano wakho omtsha ikhonkco okanye ikopi yoxwebhu.Intengiso
3. Unento Onokuyithetha
Ngokuqinisekileyo, uzuze itoni yamakhadi amatsha eshishini kwi-shindig kwaye ukulungele ukufikelela ngaphandle. Ukuba ufumana ukulahleka malunga nezihloko oza kuxoxa ngazo, uGoogle igama lomfowunelwa okanye ishishini. Ulwazi oluncinci lokuqonda kwakhona lunokubonelela ngokuqalisa incoko. Ngaba inkampani yoqhakamshelwano ifumene nje ilungelo lomenzi elitsha okanye umhlaba wabaxumi abaphambili? Ngaba basandula ukwazisa usetyenziso olutsha? Ngaba baphumelele ibhaso lemveliso kwimveliso okanye kwinkonzo? Ukuba kunjalo, ezi zizinto onokuzikhankanya ukufumana iilwimi zabo-i-waggin '!
4. Yiya Phantsi Indlela Yenkumbulo
Xa uthumela ii-imeyile zokulandela, qiniseka ukuba ubhekisa kuyo nayiphi na into othethe ngayo ngonxibelelwano lwakho olutsha ukuze uvuselele imemori yabo, kuba kusenokwenzeka ukuba badibene nabanye abantu abaninzi. Awungeva kwangoko kwangoko, kodwa khumbula: kuba umnxeba akafowni ngokukhawuleza, oko akuthethi ukuba abanamdla. Wonke umntu, njengawe, lixakekile ishishini eliqeqeshiweyo, ke hlala ngokuzingisileyo uzingise kwaye uyakuqiniseka ukuba uhlala uphezulu kwengqondo.Intengiso
5. Jonga rhoqo
Ukongeza, qiniseka ukuba uzikhumbuze ukunxibelelana kwakhona nomfowunelwa wakho inyanga nenyanga. Basenokungabi namdla kwiimveliso okanye iinkonzo zakho ngoku, kodwa izinto zihlala ziguquka kwihlabathi eliguqukayo lezorhwebo. Khumbula: hlala uqhagamshelana, kodwa ungagqithisi. Ukudibanisa okuninzi kunokubulala iinzame zakho.
6. Cwangcisa umnxeba
Cebisa ngomnxeba wemizuzu eli-15 oza kuba luncedo macala onke kuwe nakwintanga yakho entsha - nangona uya kufuna ukugxila kwindlela umnxeba oza kumnceda ngayo. Ungaxoxa ngemveliso, iinkonzo, iintsingiselo, okanye enye into enokunceda uxhulumaniso lwakho. Yenza uphando ngaphambi kokuba wenze isiphakamiso, nangona kunjalo, ukuze uqhakamshelwano lwakho lwazi ukuba wenze umsebenzi wesikolo kwaye unomdla wokwenene wokubona indlela eninokuncedana ngayo.Intengiso
7. Cwangcisa iNtlanganiso
Ukuba wenze ubudlelwane obomeleleyo ngakumbi ngonxibelelwano olusebenza kufutshane, cela ukuseta intlanganiso nganye-nganye kwindawo equidistant. Oku akufuneki ukuba nantoni na esemthethweni. Isidlo sasemini okanye isidlo sakusasa ukuhlangana kunokuba yinto exabisekileyo kunye nokuxhamla njengendibano yegumbi lenkomfa.
8. Yenza ubuhlakani
Ukuba ngenene unethamsanqa ngaphandle- kwaye uninzi lwenza kwiminyhadala yoshishino - jonga ukuba unxibelelwano lwakho lunomdla ekwenzeni ubambiswano lobuchule. Ngelixa le nto inokuba yinto eyintlekele njengendibaniselwano, inokuba yinto elula njengesivumelwano sokuncedana ekufumaneni amathuba amatsha. Iminyhadala yemizi-mveliso ihlala igxile ekutsaleni amashishini nakwizigqeba ezinikezela ngokuhambelana. Ungavumeli ithuba lobambiswano lidlule kuwe.Intengiso
Khetha kwaye ukhethe kwezi ngcebiso zingasentla, okanye udibanise ezinye zazo ukwenza ezakho iindlela zokulandela. Ungaze uvumele umcimbi wenethiwekhi ukuba uphinde uchithe kwakhona.
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: Ityala lemifanekiso: UViktor Hanacek nge picjumbo.com
indlela yokuphilisa isisu esibuhlungu
izitulo zokuthambisa zilungile
Eyona nto ibalulekileyo yokubhloga ye-iphone
iikowuti malunga nemali nolwalamano
ndihlala e-australia njengomntu waseMelika
indlela yokuzithemba kuwe
Inkcubeko Ukhuselo Lokusingqongileyo Ingqondo Umthetho Wabucala Ubugcisa